विदे’शबाट आएका श्रीमानलाई विमा’नस्थलमा लिन जाँदा साथमा अर्कै महिला भे’टेपछि शुरु भयो यस्तो तनाव…. ( हे’र्नुहोस् भिडियो) – Sadhaiko Khabar
विदे’शबाट आएका श्रीमानलाई विमा’नस्थलमा लिन जाँदा साथमा अर्कै महिला भे’टेपछि शुरु भयो यस्तो तनाव…. ( हे’र्नुहोस् भिडियो)
प्रकाशित मिति: शनिबार, फाल्गुण १५, २०७७ समय: १९:५९:४७
काठमाडौं/ गोरखाकी एक महिला वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएका श्रीमानलाई लिन विमान स्थल गइन् । उनको २०६४ सालमा विवाह भएको थियो । उनी १५ वर्षको उमेरमा विवाह भएको थियो । उनको श्रीमानको विवाहित भइसकेको रहेछ, उनका एक छोरा पनि थिए । तर उनले जता गयो उतै पछि लागेर फकाए । जिवन गिरी नामका उनका श्रीमानले पछि लागेर जसरी पनि तिमीसंगै विवाह गर्छु भनेर छोड्दै छोडेनन् ।